Dur bara ijoollumaa inna warra saaniif hurraa bu'anii yk horii tiksanii yk dirree keessa taphataa oolanii manatt deebi'an ijoolleen olla toora tokko galanii mataa saanii dugda kan isaan fulduraatt irkisuun harkaan mudhii saa qabatanii deemuu eegalu. Kan duraa hoogganu qofatu waan halle arga.\_ Jarri toora galan sun akkuma lafa ilaalanitt walfaana "Geenyee" jedhu. Kan fulduraa hogganu "Gawuu geenyee" jedha. Utuma akkasiin gaafataa, deebii "gawuu geenye" jedhu argataa deemanii, hoogganni "Geenye" jedha. Ol kahanii yoo laalan ganda gahaniiru. Waa abiddarra jira taanaan manni hin aara. Gorora coccobsaa gammachuun mana ofiitt arreedu. Karaa bu’aa bahiin itt baayyate irra haananii manii saanii gahuu caalaa kan gammachiisu hin turre.
Malbulcheesitooti bilisummaa si'anaa ilaalcha Oromummaan gonfachiise dhiisanii kan roorrisaa akkeessaa jiru. Sunis tahitaa fi beekumsi gubbaa gad coccoba kan jedhu.Garuu wanti hin jirre coccobuu hin dandahu. Burjaajii yeroon uume jala dahatanii halagaatt hudduu gatachuun hiree Oromoo roga dhabsiisaa jiru. Ijoo laafaa ummataa tuttuquun bara baraan dadhabina ofii dagachiisaa bahanii. Qabsaawanii qabsoott hiriirsuu irra, sana kaayyoo godhatanii jiru. Hanga yoonaa lafa taakkuu tokko dhuunfanne kan jedhe hin agarre. Sana hin dandeenye taanaan maalifaan jireenya saanii bulee gaaffii jala akka galu hubachuun, jala jalaa luqqa’anii mooraa nyaaphatt yoo cehan mullatu. Lafa malee saba waanti jedhan jiraachuu hin dandahu. Bakki irra dhaabbatanii qabsawan illee rakkoo tahuuf adeemaa. Haa tahu malee dhalootaa dhalootatt dargaggoon Oromoo rakkina hanga yoonaa irra haanaa dhufaniiruu, hardhas abdiin jiran isaanumaa. Abbaa biyyumaa deeffachuu fi qajeeltuu Oromiyaa fiduuf hoggana baafachuun darabee saaniitii. Lubbuu, eenyummaa fi qabeenya ofiitii lafarraa haqamaa jiruu callisanii of irratt dhiisuu jechuun Oromummaa tuffachuu dha. Oromoo hundi miira galtummaa qaba jedhamee akka hin ciicatamne beekamuu qaba.
Bu'uura Oromoo utuu hin cimfatin kara karaa deemuun duuba Oromummaan bakka walitt deebi'antu dhibaa; amanamumma addaa qabaachuun, yaa'a keessa walitt bu’a hambisuunis rakkisaa ta’aa. Kaan kaayyoo halagaa malee kan ofii wareegamaniif hin qabanii. Kanneen akkasii dhaloota egeriif yaaduu dhabuu irra, sodaan nafxanyaas garaa keessaa hin badne. Hardha buluu fi bu'aa fi qananii ammaaf jedhanii kan humna qabutt galuu filatuu. Fakmishoon kun tuffatamaa fi salphinan jiraachuu saaf malee gaagaa hedduu hin qabu. Fakmishoon biraa, egeree fi birmadummaa saba ofiif jedhanii salphinaa fi tuffatamaan jiraachuu manna du’anii awwaalamuu wayya kaayyoo jedhu. Gaagaan saa ni baayyata; garuu kabajamaa fi boonsaa waan taheef dhaloota duuba dhufaniif fakkeenya taha.